K: အတိတ်ကို ပြန်တွေးလို့ ရာဇ၀င်သာ အသစ်ပြင်ရေး
ကောင်းကင်ကြီးက ကြည်ကြည် ။ အလံတွေက နီနီ ။ ပြည်သူတွေက ညီညီ ။ မိန့်ခွန်းတွေက တည်တည် ။ ဗိုလ်စိန်မှန် ကွင်း က နေမှ အောင်ပင်လယ်ကြီးထဲ ထိ စီးမျောလို့ ။ အဲဒီတော့ အတွေးတွေကလည်း စီရရီ ပေါ့ ။
“ မေ လ တို့ ရင့်အိုဟောင်းချိန် . . . ၀သာန်မိုးဦး မုတ်သုန်မြူးပြီ . . . တိမ်ညို မိလ္လာ ရစ်ဝိုင်းကာလေ . . . တထောင့်ကိုးရာ ကိုးဆယ် မေ မှာ . . . တို့ နိုင်ငံ သမိုင်း အသစ်ပြင်ရေးကြမည် . . .”
အခုလိုပဲ မေလ ရဲ့ ရက်တွေမှာ ရွေးကောက်ပွဲ လှုံ့ဆော်တေး တွေ လေထဲမှာ ပျံ့လွင့်နေခဲ့သည်။ ခြေလှမ်းတိုင်းမှာ တက်ကြွမူတွေ ။ ပင်နီဝတ်စုံ တွေပေါ်က လုံ့လဥသဟ တွေ ။ ခမောက်ကြီးတွေ ရဲ့ ဗျပ်ကျယ်ကျယ် အ၀န်း တလျှောက် မျှော်လင့်ချက်တွေ ခိုတွဲရင်း. . . ဦးထိပ်ချွန်ချွန် ရဲ့ ပန်းပွားတွေကနေ တဆင့် အောင်စိတ်တွေက ကောင်းကင်ယံကို ထိုးထွက်လို့ ။ သီချင်းလေး ထဲက လိုပဲ အာဏာရှင်စနစ် ကြီး က ရင့်အိုဟောင်းပြီး ဒီမိုကရေစီ လေညင်းတွေ မြူးနေ ခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ တိမ်တောင်သဖွယ် မင်ရေးကျယ် တဲ့ မြန်မာ့နိုင်ငံရေး ရာသီဥတု ကြီးထဲ မှာ ၊ အဲဒီတုန်းက ကျမ တို့တွေရဲ့ နိုင်ငံ့ သမိုင်းကို တကယ်ပဲ အသစ်ပြင်ရေး နိုင်ခဲ့ကြရဲ့ လား ။
အပြောင်းအလဲကို လိုလားနေတဲ့ ပြည်သူတွေ အားလုံးက နိုင်ငံ့ သမိုင်းကို အသစ်ပြင်ရေးကြမယ်ဟေ့ လို့ ကြိုးစားခဲ့ကြ ပေမဲ့ ၊ ရာထူး အာဏာ တွေပေါ်မှာ ယစ်မူးဖက်တွယ် နေတဲ့ စစ်အာဏာရှင်တွေ ရဲ့ တဖက်သက် အကြောင်းပြချက်ကတော့ ၊ အသစ်ပြင်ရေး ထားတဲ့ အခြေခံဥပဒေ တခု မရှိနေသေး - ဆိုပြီး ၊ ၁၉၉၀ ရဲ့ အောင်ပွဲ ရလဒ် ကို အကောက်ကြံ နဲ့ မှောက်လှန် ထားခဲ့လိုက်တာ ကနေ့အထိပဲ ဆိုပါတော့ ။ တကယ်တော့ မြန်မာ့သမိုင်းမှာ … တလအတွင်း အရေးပေါ် အပြီးရေးဆွဲခဲ့တာ ဆိုတဲ့ ၁၉၄၇ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေ ကလွဲရင် ၊ တော်လှန်ရေးကောင်စီ အစိုးရ ရဲ့ ၁၉၇၄ ဖွဲ့စည်းပုံ ဆိုတာလည်း ဦးနေ၀င်း အာဏာသိမ်းပြီး ဆယ်နှစ်ကျော် ကြာမှ တရားဝင် အတည်ပြု နိုင်ခဲ့တာလေ။
“ ပြည်သူ့ အစိုးရ တခု ကို ဖော်ထုပ် တည်ထောင်ရန် ဟူသော နားလည်ခံယူချက်ဖြင့် ပြည်သူတို့၏ ဆန္ဒအရ ရွေးကောက်တင်မြှောက် လို်က်သော ပြည်သူ့ ကိုယ်စားလှယ် များဖြင့် ဖွဲ့စည်းအပ်သည့် ပြည်သူ့ လွှတ်တော်သည် စတင်ခေါ်ယူ စည်းဝေးသည့် အချိန်မှ စ၍ အချုပ်အခြာကို ပိုင်ဆိုင်သည်။ ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံ အခြေခံ ဥပဒေ မရှိသည် ဖြစ်စေ ၊ ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံ အခြေခံ ဥပဒေ ပြဌါန်း ပြီးသည်အထိ အုပ်ချုပ်ပိုင်ခွင့် ရှိသည် ”
ဆိုတဲ့ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ရဲ့ အာဘော် သဘောထားကို ၊ ရွေးကောက်ပွဲ အနိုင်ရပြီး နှစ် လ တိတိအကြာ ဇူလိုင် ၂၇ ရက် မှာတော့ သမိုင်းဝင် ဂန္ဓီညီလာခံ ကြီး နဲ့ အတူ လက်တွေ့ အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့တော့တယ်။
အဲဒီအချိန်တွေမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နဲ့ တကွ အဖွဲ့ချုပ် ခေါင်းဆောင် တော်တော်များများကို အကျယ်ချုပ် အကျဉ်းချုပ်တွေ အသီးသီးနဲ့ စစ်တပ်ရဲ့ ဗျုဟာကျကျ လူစုခွဲ နေရာခွဲ ရပ်တည်ချက်တွေပါ ကွဲပြားအောင် လုပ်ထားပြီးပြီ။ ဒါပေမဲ့ ဂန္ဓီခမ်းမရှေ့ က မိုးရေတွေထဲမှာ ပြည်သူလူထု ကြီးက
မျှော်လင့်ချက်တွေ အပြည့်နဲ့ သောင်းသောင်းဖြဖြ ။ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်တွေ မှာလည်း ၊ ပြည်သူတွေနဲ့ အပြိုင် ဇူလိုင် မိုးသည်းသည်းကို အံတုရင်း ၀မ်းသာ ၀မ်းနည်း မျက်ရည်တွေ ဖြိုင်လို့ ။ ဒါပေမဲ့ ဂန္ဓီခမ်းမ ရဲ့ အဆင်းမှာပဲ အဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ အင်အားတွေ ဦးဆောင်မူတွေ တွဲဆက်မူတွေ ကို ၊ တခုခြင်း တယောက်ခြင်း တရက်ခြင်း စနစ်တကျ ဖြိုခွင်း ခံရလေတော့ပြီ။
အဲဒီကတည်းက ပြည်သူ့ အစိုးရ သာ ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် ၊ အစိုးရတွေ လေး- ငါး ဆက် လောက် တောင် ပြောင်းပြီး နေလောက်ပြီ ဖြစ်တဲ့ ၊ ဆယ်စုနှစ် နှစ် ခု နီးပါး ရှိလာတဲ့ အချိန် မှာတော့ ၊ စစ်တပ်အစိုးရ ပြောတဲ့ လိုအပ်နေတယ်ဆိုတဲ့ ရေးဆွဲနေတယ်ဆိုတဲ့ ၊ တဖက်သက် အခြေခံဥပဒေ ဆိုတာ ကြီး ရလာခဲ့ပါပြီ တဲ့ ။ နာဂစ်ဥပဒေ ၊ မသာ မီးကွင်းပစ် ဥပဒေ ၀ိသေသ တွေ အထူးထူး ၊ ၀ိဝါဒ တွေ အထွေထွေ ဖြစ်နေတဲ့ ၊ ဒီ အခြေခံ ဥပဒေ ကြီးကို . . . ကဲ အခု နောက်တခါ အသစ်ပြင်ရေး ကြရအုံးမည် ။
ပုဒ်မ ၄၃၆ ဆိုတဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်မူ ဆိုင်ရာ ပုဒ်မကြီးကို ပြင်ဆင်ဖို့ ရန် အတွက် ၊ ပြောကြသလိုဆို … စစ်ဘားတိုက် လွှတ်တော်ကြီးရဲ့ မျက်နှာစာ တံခါးကြီးကို ဖွင့်ပစ် နိုင်ဖို့ အတွက်၊ ပြည်သူ့ ဆန္ဒ ထုပ်ဖော်ပွဲ တွေ လမ်းမတွေပေါ် လျှံကျ လာပြန်ပြီ။ လက်မှတ်ရေးထိုး ဆန္ဒဖော်ထုပ်လွှာတွေ လူတွေကြားထဲ ပျံဝဲ လာပြန် ချေပြီ။ အဲဒီအတိုင်းပါပဲ ။ လွန်ခဲ့တဲ့ အနှစ် နှစ်ဆယ်ကျော် ကာလတွေ တုန်းကလည်း ၊ ၁၉၉၀ အထွေအထွေ ရွေးကောက်ပွဲ ကြီးနဲ့ အတူ ပြည့်သူ့ဆန္ဒဖော်ထုပ်လွှာ တွေ တတိုင်းပြည်လုံး အနှံ့ ၊ လျှံခဲ့ ပျံခဲ့ သည် ပဲ မဟုတ်လား ။
“ခမောက်ရဲ့ ဘေးမှာ ကြက်ခြေခတ်လို့ . . . သမိုင်းဟောင်း အသစ်ပြင်စို့ . . . ဖြောင့်မတ် တည့် မှန်တည်ကြည် ဂုဏ်မချို့ . . . အဖွဲ့ချုပ်သဘောထားမို့ . . . ရည်မှန်းချက် လ၀န်းအိမ် ဒီနွေမိန် ရွှန်းကြည်လဲ့လို့ . . . ဘ၀ မချို့ အလှ မချို့ အားမာန်မချို့ပါ . . . ပြည်သူ့ အောင်မြေ သပြေနု ချိန် မို့ . . .”
မဲစာရွက်တွေ ပေါ်က၊ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် သင်္ကေတ ခမောက်ပုံ ရဲ့ ဘေးမှာ ကြက်ခြေခတ်နိုင် ဖို့ အတွက် ၊ ကျမ တို့ လူငယ်တွေ တရွာဝင် တရွာထွက် ၊ ဟောပြော စည်းရုံးခဲ့ကြသည်။ မေလ ရဲ့ နွေနေက စူးရဲ လှပေမဲ့ မမောနိုင် ကြ မပမ်းနိုင်ကြ ။ သမိုင်းအဟောင်း တွေကို ဒီတချီတော့ အသစ်ဖြစ်အောင် ပြင်နိုင်ကြတော့မယ်… လို့ လုံးဝ ဧကန် စိတ်ချ မျှော်လင့် လို့ ပေါ့ ။ လ၀န်းအိမ် ကြီး ကလည်း မိုးကောင်းကင် မှာ ကြည်လင် ၀င်းပ အေးမြ လို့ပေါ့ ။
“ ‘စု’ နိုင်မှ ချမ်းသာမည် . . . ‘စု’ နိုင်မှ ကြီးပွားမည် . . . ‘စု’ နိုင်မှ တိုးတက်နိုင်မည် ယုံယုံကြည်ကြည် စုံစုံညီညီ တို့အားလုံး ယုံကြည် . . ”
သီချင်းလေးတွေ ဆောင်ပုံလေး တွေက ကျမတို့ နှုတ်ဖျား မှာ တရွရွ တဖွဖွ ။ “ ပိတောက်တွေ လှိုင်တဲ့ နှစ်… ခမောက်တွေ နုိုင်မဲ့ နှစ်” ဆိုပြီး ပိတောက်ပန်း တွေကတောင် တခဲနက် အောင် ၀င်းဝါထိန် လို့ ။ “ငု နဲ့ ပိတောက် နွေမှာပြိုင် . . . စု နဲ့ ခမောက် မေမှာနိုင်” ဆိုတဲ့ အတိုင်း အားလုံးရဲ့ ခေါင်းပေါ်မှာ ခမောက်တွေ နေရာယူခဲ့တဲ့ ၁၉ ၉ ၀ မေ ။
ဒီနှစ်တော့ ငွေရတု အကြို သို့ တိုင်ခဲ့လေပြီ ။ ခေတ်တခေတ် ဒါမှမဟုတ် သမိုင်းအဖြစ်သနစ် တခု ပြောင်းလဲ ထုဆစ်ပုံဖော် နိုင်လောက်အောင် လုံလောက်တဲ့ ၊ နှစ်ဆယ့်လေးနှစ် ဆိုတဲ့ အချိန်ကာလ မှာ၊ လ၀န်းအိမ်ကြီး က ၊ မိုးကောင်းကင်မှာ ရှိနေဆဲပါပဲ ။ ‘စု’ ကလည်း အားလုံးရဲ့ နှလုံးသား မှာ ကြီးစိုးလွှမ်းမိုး နေဆဲပါပဲ ။ ဒါပေမဲ့ ခမောက်တွေ ရဲ့ နွေဆောင်ပွဲ မေအောင်ပွဲကြီး ကိုတော့ ရုပ်ရော နာမ်ရော ဒြပ်ရော ကျမတို့ ဘယ်လိုမှ ရှာ မတွေ့ နိုင်ကြ တော့ဘူး ။ အဲဒီ အောင်ပွဲကြီးထဲက အောင်ပွဲခံ ပြည်သူ့ ကိုယ်စားလှယ် တွေမှာလည်း တချို့ (ရုပ်) မရှိတော့ပေမဲ့ (နာမ်)ရှိနေသေး . . . တချို့ (ရုပ်) ရှိနေသေးပေမဲ့ (ဒြပ်) မရှိတော့ ။ ရွေးကောက်ခံ ပြည်သူ့ ကိုယ်စားလှယ် တယောက် ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ကျမရဲ့ ဖခင်ကြီး ထံမှာတောင် ၊ နိုင်ငံရေး (ရုပ်-နာမ်-ဒြပ်) တွေ ကျမ သေချာ မခွဲ ခြားနိုင်တော့ ။ သူ့ဆီမှာ ဆဲဗင်းဇူလိုင် ၀ိညဉ်တွေက စလို့ ၊ ရှစ်လေးလုံး ဖြတ်သန်းမူတွေ အလယ် ၊ အမျိုးသား ဒီမုိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ဝင် တယောက်ရဲ့ ရုန်းကန်ရပ်တည်မူ တွေ အထိ နိုင်ငံရေး (ဒြပ်)သားတွေ အပြည့် ရှိနေသေးပေမဲ့ ၊ သူ့ရဲ့ (နာမ်) ကတော့ ၊ သူ အင်မတန် မြတ်နိုးလှတဲ့ အဖွဲ့ချုပ်ကြီး နဲ့ မသက်ဆိုင်တော့ပြီလား ။ အဖွဲ့ချုပ် ရဲ့ ၉၀ ရွေးကောက်ပွဲအလွန် ၊ ဂန္ဒီခန်းမ ညီလာခံအဆင်း ၊ နိုင်ငံရေး မုန်တိုင်းကြမ်းကြီးထဲမှာ ၊ မားမားရပ်ပြီး နိုင်ငံရေး အန်တုဖို့ ကြိုးစားခဲ့တဲ့ အတွက် ၊ အဲဒီတုန်းက ပါတီရဲ့ နို့ထိန်း ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူများရဲ့ အငြိုအငြင် အထင်မြင်လွဲမူကို ခံခဲ့ရသည်။ ပါတီရပ်တည်ရေးကို သာ ဦးစားပေး ပြီး ၊ နိုင်ငံရေး ရပ်တည်ချက်ကို အလျှော့ပေး ထိုးကျွေးခဲ့တဲ့ ၊ အဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ သမိုင်း အမှောင်တကွေ့ မှာ ၊ သူ့ရဲ့ နိုင်ငံရေး ရပ်တည်ချက် (ဒြပ်)သားထု အတွက် ၊ (နာမ်) နဲ့ (ရုပ်) တချို့ ကို စတေး ပြစ်ခဲ့ရသည်။ အခုတော့ ကျမတို့ အိမ်ရဲ့ နံရံ ထက်မှာ ခမောက်ဆိုတဲ့ (ရုပ်) ကြီးတွေ ပင် မရှိတော့ ။ မရှိတော့ ဆို ၊ အသစ်တဖန် ပြန်လည် နိုးထ လာတဲ့ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ ချုပ်ကြီး ရဲ့ အလံကိုင်သူ “စု” ကိုယ်တိုင် ကတောင် ၊ အတိတ်ကို အရိပ်ထဲမှာ ထားခဲ့ချင်သည်ပဲ ။ ၉ ၀ ရလာဒ် အကြောင်း စာမဖွဲ့ တော့ပြီပဲ ။ ခမောက်ကြီး တွေ ကို ၊ ဘေးမှာ ချ ထားလိုက်ပြီပဲ ။
ခမောက်ကြီး တွေထဲမှာလည်း ၊ အမှည့်ကြွေ အစိမ်းကြွေ ၊ ကြွေပုံ အနည်းနည်း နဲ့ ကြွေတဲ့သူတွေက ကြွေသွားကြပြီ ဖြစ်ပေမင့် ၊ နိုင်ငံရေးအားဖြင့် သူတို့ ကျွတ်လွတ် ကြပါ့မလား ။၉၀ ရလာဒ်ကို အသိအမှတ်ပြုခြင်း ဆိုတဲ့ ၊ နိုင်ငံရေး အမျှဝေ ခြင်း မလုပ်နိုင်သေးသ၍ ၉၀ အောင်ပွဲ သံယောဇဉ် အစွဲတွေ ထဲမှာ သူတို့ ၀ဲလည်နေကြပေဦးမည် ။ လူလည်း မကြွေ ယုံကြည်ချက်တွေလည်း မကြွေသေးတဲ့ သူတွေ မှာလည်း အခြေအနေ အရပ်ရပ် အရ ရပ်တည်ချက်တွေ ပြောင်းချင်ပြောင်း စောင်းချင်စောင်း သွား ရပေမယ့် ၊ ၉၀ ရလာဒ်ကြီး ကို စိတ်မှာ စွဲ … ကြိတ်ကာ ခဲ ရင်း မပြေ မကြေ နိုင် ရှိနေကြပေဦးမည် ။ တကယ်တော့ သူတို့တွေဟာ ၊ ၉ ၀ မေရဲ့ မကြေ မကြွေ မကျွတ် နိုင်သေးသူများပါပေ ။
လက်တွေ့ အရှိ ပကတိ အတိုင်းတင်မက ယုံကြည်ချက် သက်သက်နဲ့ လည်း ရပ်တည်နိုင်တဲ့ နတ္တိပစ္စယော - မရှိခြင်းဖြင့် ကျေးဇူးပြုခြင်း ဆိုတဲ့ နိုင်ငံရေး နည်းနာ တွေကို နားမလည် နိုင်သေးတဲ့ အချိန်တချိန်တုန်းက ဖခင်ဖြစ်သူကို မသိသား ဆိုးရွားစွာ မေးခဲ့ဘူးသည်။ လွှတ်တော်ခေါ်ယူရေး ဆိုတဲ့ သဘောထားက ဒီလောက်နှစ်တွေ ကြာနေမှဖြင့် ဘာအဓိပ္ဗါယ်ရှိတော့မှာလည်း - လို့ ဆိုတော့ - ဟုတ်တာပေါ့ကွာ လူတွေလည်း စုံစုံညီညီ မရှိနိုင်တော့ဘူးပေါ့ . . .ဒါပေမဲ့ ပြည်သူ့ဆန္ဒကို အသိအမှတ်ပြုတယ် ပြည်သူ့အစိုးရ တခုကို အလေးအနက်ထားတယ် ဆိုတဲ့ နိုင်ငံရေး အစဉ်အလာတခုကို ရှိစေချင်တာ ၊ ဒီမိုကရေစီ အောင်စိတ်ကို နောက်တက်လာမဲ့ အစိုးရအဖွဲ့ တခုဆီ သိက္ခာရှိရှိ ငြိမ်းငြိမ်းအေးအေး လက်လွှဲပြောင်းပေးနိုင်ယုံပဲ ဖေဖေ တို့ မျှော်လင့်တာပါကွာ - လို့ ၉ ၀ အရေးကို အံကြေးပြီး ဖြေရှာတယ်။ အေး ဒါပေမဲ့ ၁၉၉၀ မေ ဆိုတဲ့ ပြက္ခဒိန်စာရွက်ကိုတော့ သမိုင်းထဲကနေ ဘယ်သူမှ ဆုတ်ဖြဲ ပြစ်ခွင့် မရှိဘူး . . . ကျော်ချ သွားလို့ မရဘူး . . . ငါတို့မှာ စစ်အာဏာရှင်တွေရဲ့ အတိတ်က ကြမ်းကြုတ် ရက်စက်မူတွေကို လက်စားချေလိုစိတ် မရှိပေမဲ့ သင်ပုန်းချေလိုစိတ်လည်း လုံးလုံး မရှိဘူးကွာ … လို့ ယတိပြတ် ဆိုလေသည်။
အဲဒီလိုပဲ “စု-လွှတ်-တွေ့ ” ကို တလျှောက်လုံး ကိုင်စွဲ လာတဲ့ အဖွဲ့ချုပ် တည်ထောင်သူ နာယက ကြီး ဦးဝင်းတင် ကလည်း သူ့ကိုယ်သူ ၉ ၀ စော် နံသူ လို့ အမြဲ ဂုဏ်ယူ စွာ ၀န်ခံတတ်လေသည်။ ၉၀ ရလာဒ်ကို နားလည် တန်ဖိုးထား ခဲ့လေသည်။ သူ့ရဲ့ “ ဘာလဲဟဲ့ … လူ့ငရဲ ” စာအုပ်ထဲက အခန်းတခန်း ရဲ့ ခေါင်းစဉ် ပေးထားပုံကို ကျမ တော်တော်လေး စိတ်ဝင်စား လေးနက် မိသည်။
ခေါင်းစဉ်က - “အနာဂါတ်ကို ပြန်သွားခြင်း”
တကယ်ဆို အနာဂါတ် ဆိုတာ ရှေ့ကို လျှောက်ရမှာလေ ၊ ပြန်သွားလို့ မှ မဖြစ်နိုင်တာ ။ ဒါပေမဲ့ ဦးဝင်းတင်ကတော့ အနာဂါတ်ကို ပြန်သွားယုံတင်မက ၊ တူးဆွဖော်ထုပ် ထားတယ်။ ပစ္စုပ္ဗန် နဲ့ ဆက်စပ် ပေါင်းစည်းထားတယ်။ တကယ်တော့ ဒီ “အနာဂတ်” ထဲမှာ သူ တင်စား သိမ်းဝှက်ထားတဲ့ အရာတွေက ရည်မှန်းချက်တွေ မျှော်လင့်ချက်တွေပေါ့ ။ သူပြောသလိုဆို ရှစ်လေးလုံး ရဲ့ အနာဂတ် ၊ ၉၀ မေ ရဲ့ အနာဂတ် ၊ ဂန္ဓီကြေငြာစာတမ်း ရဲ့ အနာဂတ် ၊ ရွှေဂုံတိုင် ကြေငြာစာတမ်းရဲ့ အနာဂတ် … အားလုံးသော ရည်မှန်း မျှော်လင့်ချက်တွေဟာ စစ်အာဏာရှင် စနစ်မှန်သမျှ ကို ဆန့်ကျင် တိုက်ဖျက်ရေး ဆိုတဲ့ အခြေခံ မူပေါ်မှာပဲ ရှိနေသင့်တယ်… တဲ့။
“ဆယ်စုနှစ် နှစ်ခုကျော် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အနာဂတ်တွေဟာ အနာဂတ် အဖြစ်နဲ့သာ ရှိတည်နေပါသေးတယ် ” လို့ ဆိုလိုက်တော့မှ ၊ အနာဂတ် ကို ပြန်သွားခြင်း ရဲ့ အဓိပ္ဗါယ်က ပေါ်လွင်လာတယ်။ အနာဂတ်ကို ပြန်သွားနေစရာ မလို တော့ဘဲ တော်လှန်-မာန်-ညဏ်-သတ္တိတွေ နဲ့ အနာဂတ်ကို ချီတက် ကြပါလို့ လည်း ဦးဝင်းတင်က နှိုးဆော် ထားခဲ့တယ်။ အနာဂတ်ကို ချီတက်ဖို့ အတွက် “ နိုင်ငံရေးသစ် ” ဆိုတဲ့ လမ်းကိုလည်း တိတိပပ ၀ိသေသ နဲ့ ဖော်ညွှန်းပေးခဲ့သလို ၊ လမ်းဖောက်ရမဲ့ လက်နက် ယန္တယားတွေကိုပါ တခါတည်း နေရာ ပြ ခဲ့တယ်။
“နိုင်ငံရေးသစ် ဆိုတာ စကားလုံးသာ ကြီးကျယ်တာပါ။ လုပ်ရမယ့် ကိစ္စက သိပ် အကြီးအကျယ် မဟုတ်ပါဘူး။ စစ်အာဏာရှင် စနစ်ကို ဆန့်ကျင်တဲ့ နိုင်ငံရေး အင်အားစုတွေ လက်တွဲပေါင်းစည်း လှုပ်ရှားဖို့ပါပဲ ။ အားလုံး အသံတူ အော်ကြဖို့ အလုပ်တူ ဖော်ကြဖို့ပါပဲ ။ အားလုံး ညီညွတ် လက်တွဲ ကြဖို့ပါပဲ ။ နိုင်ငံရေးသစ် ဆိုတာ ဒါပါပဲ ။”
နိုင်ငံရေးသစ် ကို ကျမတို့ တကယ်ပဲ တောင့်တ ပါတယ်။ ရာဇ၀င် ကို အသစ်ပြင်ရေးဖို့ လည်း ကျမတို့ ခဏခဏ ကြိုးစားခဲ့ ကြတယ်။ ဒါပေမဲ့ အတိတ်ကို ပြန်မတွေးချင်လို့ တော့ မရ ။
၂၄ မေ ၂၀၁၄
မေလ ၂၇ ရက် မှာ ငွေရတု အကြို နှစ်ဆယ့်လေးနှစ် တိုင်ပြီ ဖြစ်တဲ့ ၁၉ ၉ ၀ ပါတီစုံ ဒီမိုကရေစီ အထွေအထွေရွေးကောက်ပွဲ ကြီး အား ဂုဏ်ပြု သတိရလျက် ......
Weekly Eleven Journal Vol.9No. 22
Labels: Burma History , Family , Printed